Inqubomgomo Yemfihlo - Potato System Magazine
main Inqubomgomo Yobumfihlo
Iphephabhuku Lesistimu Yamazambane
Ikheli lewebhusayithi yethu: http://potatosystem.ru/
Yisiphi idatha yomuntu siqu esiyiqoqa futhi ngenjongo ngayiphi
Uma isivakashi eshiya amazwana kusayithi, siqoqa idatha ecacisiwe kwifomu lokuphawula, kanye nekheli le-IP lomvakashi kanye nedatha yesistimu yomsebenzisi wesiphequluli ukunquma ugaxekile.
Intambo engaziwa eyenziwe ekhelini lakho le-imeyili ("hash") inganikezwa kwinsizakalo yeGravatar ukuthola ukuthi uyayisebenzisa yini. Inqubomgomo yobumfihlo yeGravatar iyatholakala lapha: https://automattic.com/privacy/. Lapho imibono yakho isivunyelwe, isithombe sakho sephrofayela sizobonakala esidlangalaleni ngokuya ngamazwana akho.
Uma ungumsebenzisi obhalisiwe futhi ulayishe izithombe kusayithi, kufanele ugweme ukulayisha izithombe nge-metadata ye-EXIF, ngoba ingaba nedatha yendawo yakho ye-GPS. Izivakashi zingakhipha lolu lwazi ngokulanda izithombe kusuka kusayithi.
Uma ushiya amazwana kuwebhusayithi yethu, ungavumela isitoreji segama lakho, ikheli le-imeyili kanye newebhusayithi ku-cookie. Lokhu kwenziwa ukuze kube lula, ukuze ungagcwalisi idatha futhi uma uphinda ubeka amazwana. Lawa makhukhi agcinwa unyaka owodwa.
Uma unayo i-akhawunti kusayithi bese uyifaka, sizosetha ikhukhi yesikhashana ukuthola ukuthi isiphequluli sakho sisekela amakhukhi, i-cookie ayinakho ulwazi lomuntu siqu futhi isusiwe uma uvala isiphequluli sakho.
Uma ungena ku-akhawunti yakho, sibeka amakhukhi amaningana anemininingwane yokungena nezilungiselelo zesikrini. Amakhukhi wokungena agcinwa izinsuku ezimbili, amakhukhi anezilungiselelo zesikrini - unyaka. Uma ukhetha inketho ethi "Ngikhumbule", imininingwane yakho yokungena izogcinwa amasonto amabili. Lapho uphuma ku-akhawunti yakho, amakhukhi wokungena ngemvume azosuswa.
Uma uhlela noma ushicilela isihloko kusiphequluli, ikhukhi eyengeziwe izogcinwa, ayinayo idatha yomuntu siqu futhi iqukethe kuphela i-ID yerekhodi ohleliwe, iphelelwa yisikhathi ngosuku lwe-1.
Okuqukethwe okushumekile kwamanye amawebhusayithi
Izinto ezikuleli sayithi zingabandakanya okuqukethwe okufakiwe (isibonelo, amavidiyo, izithombe, izihloko, njll), okuqukethwe okufanayo kuziphatha njengokungathi isivakashi siya kwesinye isayithi.
Lawa masayithi angaqoqa imininingwane ngawe, asebenzise amakhukhi, asebenze umkhondo ongezekile wesithathu futhi aqaphe ukuxhumana kwakho nokuqukethwe okushumekiwe, kufaka phakathi ukulandela ukulandelela uma une-akhawunti futhi ungene ngemvume kuleyo sayithi.
Sabelana nobani idatha yakho
Sizogcina isikhathi esingakanani idatha yakho
Uma ushiya amazwana, amazwana ngokwawo kanye nemethadatha yayo agcinwa ngokungapheli. Lokhu kwenziwa ukuze kunqume futhi kuvunyelwe amazwana alandelayo ngokuzenzakalelayo, esikhundleni sokuwabeka emgqeni ukuze avunyelwe.
Kubasebenzisi abhalisiwe kusayithi lethu, sigcina ulwazi lomuntu siqu abanikezayo kuphrofayela yabo. Bonke abasebenzisi bangabona, bahlele noma basuse ulwazi lwabo kuphrofayela nganoma yisiphi isikhathi (ngaphandle kwegama lomsebenzisi). Ukuphathwa kwewebhu kungabona futhi kushintshe lolu lwazi.
Ayini amalungelo akho yedatha yakho?
Uma unayo i-akhawunti kusayithi noma uma ushiye amazwana, ungacela ifayela lokuthumela ngaphandle idatha yedatha esiyilondolozile ngawe, kufaka phakathi idatha oyinikezile. Ungase futhi ucele ukususwa kwale datha, ayifaki idatha esiyidingayo ukugcina ngezinhloso zokuphatha, ngomthetho noma ngezinjongo zokuphepha.
Ukuphawula komsebenzisi kungabhekwa nge-othomathikhi yesevisi yokuthola ugaxekile.
Siyivikela kanjani idatha yakho
Yiziphi izinqubo zokulwa nokugenca ezemukelwa
Yimuphi amaqembu esithathu esithola idatha kuwo
Yiziphi izinqumo ezizenzakalelayo ezenziwayo ngokuya ngemininingwane yomsebenzisi
Izidingo zokudalulwa kwezimboni zokulawula